GOS-P1: Inyocha Google Open Source - Nkebi 1 | Site na Linux
Na edemede gara aga anyị kwuru maka mkpa na ọnụọgụ karịrị nke ndị Meghee Isi mmalite, nke na-agbasa kwa ụbọchị ọ bụghị naanị n'etiti ndị mmadụ na obodo (otu) ma n'etiti ndi mmadu na ndi mmadu.
Na ya, anyị kwuru n'ụzọ pụrụ iche 5 Tech Refeyim si otu a maara dị ka GAFAM. Kedu nke ọ bụla nwere nchekwa nke ọha nke ngwanrọ maka Meghee Isi mmalite. Ya mere, na nke a nnyefe mbu Anyị ga-amalite obere nyocha nke ụfọdụ ngwa dị n'ime ya, bido na Isi mmalite Google.
Maka ndị nwere mmasị ịgagharị nke anyị gara aga post metụtara isiokwu, ị nwere ike pịa njikọ na-esonụ, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a:
"Taa, ụlọ ọrụ ọha na eze na nke onwe ha na-aga n'ihu na-esonye na ntinye nke Free Software na Open Source na ụdị azụmaahịa ha, nyiwe, ngwaahịa na ọrụ ha. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, teknụzụ ndị nweere onwe ha na nke ghere oghe na-abawanye akụkụ dị mkpa nke ụzọ esi arụ ọrụ na n’ime ha, maka abamuru nke ndị nwe ha, ndị ahịa ha ma ọ bụ ụmụ amaala ha." GAFAM Open Source: Teknụzụ Refeyim na-akwado Open Source
1 GOS-P1: Isi mmalite Google - Nkebi 1
1.1 Google Open Source ngwa
1.1.5 Oghere Apache
GOS-P1: Isi mmalite Google - Nkebi 1
Ngwa nke Isi mmalite Google
Abseil bu mkpoko nke ogugu akwukwo akwukwo edere emeghe. Ezubere koodu Cse Abseil nke C ++ iji mee ka ọbá akwụkwọ C ++ dị elu. N'ọnọdụ ụfọdụ, Abseil na-enye akụkụ ndị na-efu na ụkpụrụ C ++; na ndị ọzọ, Abseil na-enye ndị ọzọ na ọkọlọtọ. Abseil ekwughị na ya na-asọ mpi na koodu ọ bụla n'ọbá akwụkwọ. lee ihe na: Isi mmalite Google, GitHub y Websaịtị.
AdaNet bu AutoML bu osiso ma nwekwaa mgbanwe na nkwa nke mmuta. Nke ahụ bụ, ọ bụ ihe ndabere nke TensorFlow dị fechaa maka imepụta ihe eji eji igwe eji arụ ọrụ nwere obere enyemaka ndị ọkachamara. Ọ na-eji AdaNet algorithm si «Cortes et al. 2017 »ịmụta usoro nke netwọkụ neural dị ka usoro nke subnets mgbe ị na-enye mmesi obi ike. N'ụzọ dị oke mkpa, AdaNet na-enye usoro izugbe ọ bụghị naanị maka ịmụpụta ụkpụrụ ụlọ nke netwọkụ neural, kamakwa maka ịmụ etu esi agbakọ maka ụdịdị ka mma. lee ihe na: Isi mmalite Google, GitHub y Njikọ njikọ.
Gam akporo bu sistemu eji aru oru na ngwanrọ software emere maka otutu igwe di iche iche di iche, dika ekwenti, mbadamba, ihe eji eyi (Wearables), telivishọn, ụgbọala na ngwaọrụ ejikọrọ. Ebumnuche kachasị nke gam akporo bụ imepụta ihe eji emepe emepe maka ndị na-ebu ya, OEMs, na ndị mmepe iji weta echiche ha na ndụ ma nyefee ngwaahịa na-aga nke ọma nke ụwa na-eme ka ahụmịhe mkpanaka maka ndị ọrụ nweta. lee ihe na: Isi mmalite Google, Isi Iyi Google y Njikọ njikọ.
Angular bụ usoro ngwa weebụ maka mkpanaka, desktọọpụ na ngwaọrụ weebụ. N'ihi ya, ọ bụ ikpo okwu mmepe nke na-achọ ime ka mmepe weebụ ghara inwe mmetụta, na-elekwasị anya na nrụpụta nrụpụta, ọsọ, na nnwale. Enwere ike itinye akwụkwọ anamachọihe nke Angular na desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka dịka webụsaịtị na ngwa. lee ihe na: Isi mmalite Google, GitHub y Websaịtị.
Apache Beam bụ otu ihe atụ ejikọtara ọnụ maka ịkọwa ma na-agba pipeline nhazi data. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-enye usoro mmemme dị n'otu dị elu, na-enyere gị aka itinye ọrụ ntanetị na ntinye data nke nwere ike ịgba ọsọ n'oge ọ bụla. Ọ dị mfe iji Apache Apex, Apache Flink, Apache Spark, na Google Cloud Dataflow, n'etiti usoro nhazi ndị ọzọ ekesara. E mepụtara Apache Beam site na ọtụtụ teknụzụ dị na Google, dị ka MapReduce, FlumeJava, na Millwheel. Google nyere koodu Apache Software Foundation na 2016 na ndị Googlers na-aga n'ihu na-enye onyinye mgbe niile na ọrụ ahụ. lee ihe na: Isi mmalite Google, GitHub y Websaịtị.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere nyocha nke mbụ a «Google Open Source», na-enye ngwa dị iche iche na-atọ ụtọ ma dị iche iche mepere emepe nke teknụzụ Giant nke «Google»; na ọ bụ nke nnukwu mmasị na ịba uru, maka dum «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » GOS-P1: Inyocha Google Open Source - Nkebi 1